Nagu saabsan - Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.diiradda saaraya waxyaabaha kiimikada ah ee diiradda lagu saarayo, waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee dhoofiya alaabta ceyriinka cuntada ee Shiinaha. Shirkadda aan walaalaha nahay ee Weifang Haibin Chemical Co., Ltd. oo la aasaasay 1999, waa bixiyaha ugu weyn ee chloride magnesium, chloride calcium, metabisulfite sodium, sodium bicarbonate, PAC (chloride poly aluminium) ee Shiinaha. 22kii sano ee la soo dhaafay, waxaan helnay tikniyoolajiyad wax soo saar oo horumarsan, sidaa darteed waxaan ku siin karnaa alaab tayo wanaagsan leh.
Si aan ugu adeegno macaamiil badan, waxaan ballaarinay badeecooyin kiimiko badan oo ay u badan tahay inay ku daraan raashin daboolaya alaabooyinkooda Aspartame, AK, Ascorbic Acid Coated / DC, Calcium / Sodium Ascorbate, Ascorbyl Monophosphate, Citric Acid, Sodium Citrate, Potassium Sorbate / Sorbic Acid, Sorbitol Crystalline.
Iyada oo leh khibrad iyo guul leh la shaqaynta suuqyada Shiinaha iyo kuwa caalamiga ahba, Bohuachem wuxuu kaloo si fiican ula shaqeeyaa oo u shaqeeyaa wakiil warshado badan siyaabo kala duwan. Hadda Bohuachem wuxuu ballaariyay khadadkiisa in ka badan boqol nooc oo badeecooyin ah oo ku jira maaddooyinka Cuntada.
Waxaan leenahay guryo u gaar ah, shaybaar tijaabo ah, waxaad si fudud nooga iibsan doontaa dhammaan noocyada cuntada lagu daro. Waxaan kaa caawineynaa inaad xakameyso tayada, hubiso gaarsiinta degdegga ah, waxaan ka qaadnaa dhammaan kuwa lumay dhibaato tayo leh awgeed, ha ka welwelin tayada.
Hoos waxaa ah badeecadayada inta badan
macaaneeye Ilaaliyeyaasha iyo antioxidants Xakamaynta aashitada Kiimikooyin kale
Calcium propionate DL -Malic acid Glucose Delta lactone Calcium chloride
Sodium cyclamate Kaalshiyam kateetet Sodium citrate Chloride Magneisum
Erthritol Disodium oo kooban Fumaric acid Metabisulfite sodium
Dextrose fuuqbax Ku hagaaji EDTA sodium Citric acid Bicarbonate sodium
Acesulfame k Erythorbic acid Potassium citrate Kaarboonayda sodium
Aspartame Potassium sorbate Tartaric acid Polyaluninum chloride
Sucralose Benzoate sodium Gallic acid
Dextrose Sodium de hydro acetate (S-DHA) L malic acid
Xylitol stevia Sodium Do acetate Lactic acid
Mannitol fructose crystalline Naas -nuujinta sodium
Dextrose monohydrate Metabisulfite sodium
Sorbitol crystalline ah Nitrite sodium
Multitol crystalline ah Sodium propionate
Trehalose erythritol Sorbic acid
BHT (Toluene Hydroxide Butylated)